Mnf-Singapore – Myanmar Nurses' Family – Singapore
Myanmar Nurses' Family – Singapore
MNF Singapore.သည် စင်္ကာပူနိင်ငံရောက် မြန်မာသူနာပြုများ စုပေါင်းဖွဲ.စည်းထားသော မြန်မာသူနာပြုမိသားစု (Myanmar Nurses’ Family Singapore) ဖြစ်ပါသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာသူနာပြုများ၏ အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုအချင်းချင်း ပြန်လည်ဆုံတွေ.နိုင်ရန်နှင်. ရင်းနှီးမှု ပိုမိုရရှိှိစေရန်
စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာသူနာပြုအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီမှုနှင်. ချစ်ကြည် စည်းလုံးမှု ရရှိစေရန်
သူနာပြုအချင်းချင်း အသိပညာဗဟုသုတများ ေ၀ငှ ဖလှယ်နိုင်ရန်
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး၊ ကျန်းမာရေး ၊လူမှုရေးကိစ္စများတွင်အပြန်အလှန် ကူညီနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သူနာပြုဆိုင်ရာပညာရပ်များတိုးတက်ရန် အတွက် နှစ်လတစ်ကြိမ်ကျ အစည်းအေ၀းပြုလုပ် တွေ.ဆုံပြီး CNE အစီအစဉ်မှ သူနာပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများ ဆွေးနွေးဖလှယ်ခြင်း၊
မင်ဘာများအတွက် အလုပ်အကိုင်၊ အခွင်.အလန်းများ ကူညီရှာဖွေပေးခြင်း ၊
မင်ဘာများ၏ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စ များတွင် အကူအညီပေးခြင်း၊
ဈေးရောင်းပွဲနှင်. အခြားသော အစီအစဉ်များဖြင်. စုပေါင်းရံပုံငွေရှာဖွေခြင်း
မင်ဘာအချင်းချင်းရင်းနှီးမှု ပိုမိုရရှိစေရန် နှစ်စဉ် မိသားစု၀င်များအတွက် တွေ.ဆုံ၊ မိတ်ဆက်ပွဲများပြုလုပ်ခြင်း
MNF Singapore’s volunteering activities for Myanmar Nationalities Friendship Cup 2018, Singapore
MNF Singapore.သည် စင်္ကာပူနိင်ငံရောက် မြန်မာသူနာပြုများ စုပေါင်းဖွဲ.စည်းထားသော မြန်မာသူနာပြုမိသားစု (Myanmar Nurses’ Family Singapore) ဖြစ်ပါသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာသူနာပြုများဧ။် အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဒီနေ့ အစည်းအဝေးမှ ပုံရိပ်လေးများ
Meeting Announcement for November 25, 2019
ကျနော်တို့ရဲ့ MNF Singapore သည် လာမည့် November 25, တနင်္လာနေ့ ညနေ 5:00 Pm မှ 7:00 Pm အထိ နှစ်လတစ်ကြိမ် ပုံမှန် ပြုလုပ်လေ့ရှိသော Bi-Monthly Meeting ကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပသွားပါမည်။ Meeting Venue : Zayar Restaurant, #03-27, peninsula Plaza Date : November 25, 2019 (Monday) Time : 5:00 Pm t0 7:00 Pm CNE: Ko Win Ko Ko Note: MNF Singapore will give …
Continue reading “Meeting Announcement for November 25, 2019”
MNF Meeting Schedule Dates for 2019
Date Venue Sponsor CNE for 30 mins 25/03/2019Between 5pm to 7pm 03-27, Level-3, Zayar Restaurant, Penisula Palaza $5 Voucher will give each person for food by MNF Ko Sai Soe Myint (2)27/05/2019 Between 5pm to 7pm 03-27, Level-3, Zayar Restaurant, Penisula Palaza $5 Voucher will give each person for food by MNF Ma Than Than …
Continue reading “MNF Meeting Schedule Dates for 2019”
ဆက်သွယ်ရန် – support@mnfsingapore.com
Blk 218, Ang Mo Kio Ave 1,
Dear members,ကျနော်တို့ရဲ့ MNF Singapore သည် လာမည့် November 25, တနင်္လာနေ့ ညနေ 5:00 Pm မှ 7:00 Pm အထိ နှစ်လတစ်ကြိမ် ပုံမှန် ပြုလုပ်လေ့ရှိသော Bi-Monthly Meeting ကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပသွားပါမည်။
Meeting Venue : Zayar Restaurant, #03-27, peninsula Plaza
Date : Novemebr 25, 2019(Monday)
time : 5:00 Pm t0 7:00 Pm
CNE: Ko Win Ko Ko
Enjoy this blog? Please spread the word :)ကျေးဇူးပြု၍ share ပေးကြပါနော်....